RASMI: Isku aadka 16-ka Kooxood ee FA Cup-ka oo la sameeyey… (Yey ku beegmeen Man United, Man City & Chelsea?) – Gool FM
(Yurub) 25 Jan 2021. Waxaa la sameeyey isku aadka wareegga 16-ka Kooxood ee FA Cup-ka, waxaana haatan la ogaaday Kooxaha ay ku aadeen Manchester United, Manchester City iyo Chelsea.
Kooxaha ka socda horyaalka Premier League ayaa inta badan u gudbay wareegga shanaad ee FA Cup-ka oo dhigan wareegga 16-ka Kooxood ee tartankan faca weyn.
Saddexleey uu dhaliyey Tammy Abraham ayaa ka caawisay inay Kooxdiisa Chelsea 3-1 ku garaacdo Luton Town, Manchester United ayaa 3-2 ku dishay Liverpool kulankii ka dhacay Old Trafford, halka Man City ay iyana 3-1 kaga soo gudubtay koox ka socotay heerka afaraad ee Ingiriiska.
Arsenal oo koobkan FA Cup-ka difaacanaysay waxaa tartankan ka ciribtirtay Southampton oo ku garaacday 1-0.
Man United oo ka soo gudubtay Liverpool, waxaa markaan wareegga 16-ka FA Cup-ka ay ku wajahayaan West Ham United, halka Chelsea ay u safri doonto kooxda Barnsley.
Dhinaca kale Manchester City ayaa u socdaali doonta Wales, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonto Swansea City, halka Everton ay ku aadi doonto kooxdii soo baxda Wycombe Wanderers iyo Tottenham Hotspur.
Haddaba halkaan hoose ka eeg isku aadka 16-ka FA Cup-ka oo dhammaystiran:-
Burnley vs AFC Bournemouth ama Crawley Town
Everton vs Wycombe Wanderers ama Tottenham Hotspur
Kulamada Wareegga shanaad oo u dhigan 16-ka FA Cup-ka ayaa la ciyaari doonaa laga bilaabo 8-da bisha Febraayo ee soo aaddan.